Usayizi wemakethe yekhofi kanye nokuhlaziywa kwesibikezelo sethemba lokuthuthuka
Ikhofi ngesinye seziphuzo ezintathu ezinkulu emhlabeni. Isiphuzo esenziwe ngobhontshisi wekhofi othosiwe. Isiphuzo esiyinhloko esidumile emhlabeni kanye nococoa netiye. Ngokwenziwa ngcono kwezinga lokuphila kwabantu bethu kanye nokukhula okuqhubekayo kokuqwashisa ngesiko lekhofi. ...
Umhlangano Wonyaka Wonyaka we-2020 China Food and Packaging Machinery Industry Association wabanjwa ngempumelelo eShanghai
Ekuseni ngoNovemba 24, 2020 Ingqungquthela Yonyaka Yenhlangano Yezimboni Zemishini Yokudla yaseChina kanye neForamu Yesishiyagalolunye Yezinsiza Zokudla zase-Asia zivulwe eShanghai. Izinkampani zemishini yokudla ezingaphezu kwezingama-300, izinkampani zomugqa wokuqala ezingaphezu kuka-100 zokudla, nabamele abangaphezu kuka-500 ababambe iqhaza ...
Isimo sokuthuthuka kanye nesibikezelo sesimo sesigaba semakethe somkhakha weyinki
1. Ukubuka konke nokuhlukaniswa komkhakha we-inki Ink yinto eketshezi enezinhlayiya ze-pigment ezihlakazeke ngendlela efanayo ku-binder futhi ine-viscosity ethile. Kuyinto ebaluleke kakhulu ekuphrinteni. Esimemezelweni sanamuhla sokuthuthukiswa komnotho wekhabhoni ephansi kanye nokukhuthaza i-gre ...
ICoca-Cola ingena esikhundleni sezinkomishi ezenziwe kabusha, i-Unilever iphinda kabili amapulasitiki asetshenzisiwe
Imikhiqizo yabathengi yomhlaba wonke efana nePepsi, Coca-Cola, ne-Unilever benze izibophezelo ezinkulu zokupakisha. Ake sibheke, yini intuthuko yamuva yokupakisha esimeme yale mikhiqizo? I-Pepsi-Cola Europe: Faka wonke amabhodlela epulasitiki asetshenziswe kabusha ngo-2022 uPepsi-Cola Europe, ...
Umbukiso wama-27 weSino-Pack China International Packaging Industry Exhibition-ipulatifomu ehamba phambili yokushintshisana ngombukiso osezingeni eliphezulu embonini yokupakisha
Umbukiso wama-27 weSino-Pack China International Packaging Industry Exhibition-isiteji esiphambili sokushintshisana ngombukiso osezingeni eliphakeme embonini yokupakisha, "Umbukiso Wemboni Yezimboni Zokupakisha Zase-27th China (Sino-Pack2021)" kanye ne "China (Guangzhou) International Packaging Produ ...
INTPAK 2020 Shanghai International Packaging Industry Exhibition izohlangana nawe eShanghai World Expo Exhibition Hall ngo-Agasti 12-14
Ukubanjwa okuphumelelayo kwe-INTPAK 2019 Shanghai International Packaging Industry Exhibition enesihloko esithi "Imboni Yokupakisha, Ukuhlakanipha Kuwina Ikusasa" kuyaqhubeka nokukhazimula kwemibukiso yemboni yokupakisha eyedlule, iba umkhakha ohamba phambili wokupakisha ...
Ukutholwa Kwensimbi Kwemikhiqizo Yokudla: Kuphephile futhi Kuvalwe
Izinhlelo zokutholwa kwensimbi zaqala ukwenziwa e-UK ngo-1948, futhi manje sezisetshenziswa kabanzi embonini yokupakisha ukudla. Isithunzi somkhiqizo wakho siyikho konke kulo mhlaba oxhumeke kakhulu, ogcwele umkhiqizo. Ukutshalwa kwezimali kumishini yokupakisha ekhiqiza amaphakheji aphephile futhi avaliwe kunga ...
Ukukhetha Izinto Ezinhle Nezindlela Zokufaka Imishini Yokupakisha
Lapho ufuna imishini yokupakisha, okungcono kakhulu okuzokwenza. Imishini yebhizinisi lakho ingaphezu kokutshalwa kwemali kokuqala. Kungenza noma kwephule ikusasa lenkampani yakho. Ngakho-ke ufuna ukukhetha imishini yokupakisha eyakhiwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu. Noma ngabe unentshisekelo ...
Izinto ezi-5 Okufakiwe Komkhiqizo Wakho Wemvelo / Ongokwemvelo Okufanele Uzenze
Ukupakisha komkhiqizo wakho kuvame ukuxhumana kokuqala umthengi anakho nomkhiqizo wakho. Wazi kanjani ukuthi kwenza umthelela omkhulu? Ngezansi kunezinto ezi-5 okupakishwa komkhiqizo wakho wemvelo / wemvelo okumele ukwenze ukuze kube kuhle, hhayi okuhle nje. 1. Vikela umkhiqizo wakho ekonakaleni nasekonakaleni. I-nu ...
UNGAYIKHETHA KANJANI IMISHINI YOKUPHAKHA OKUQONDILE
Ake sikukhombise ukuthi ungayikhetha kanjani kahle imishini yokupakisha efanele. Isibonelo, ufuna ukuthola umshini wokupakisha ukudla okulula. 1, Okokuqala, nquma ukuthi imiphi imikhiqizo ofuna ukuyipakisha ukuze uyithenge, imikhiqizo ehlukile izosebenzisa uhlelo oluhlukile lokugcwalisa, njengokugcwalisa i-auger, inhlanganisela yethu ...
Uhlobo luni lomshini wokupakisha oludingekayo ekupakisheni ukudla kwenja?
Izilwane zingabalingani abahle besintu, futhi manje njengoba izimo zethu zomnotho sezanele, kube yintokozo kubantu abaningi ukugcina izilwane ezifuywayo, kanti labo abagcina kakhulu bayizinja. Ngakho-ke, ukufunwa kokudla kwenja kukhulisa, isikhwama singenye yezinketho ezinhle kakhulu ezikahle nezenhlanzeko, futhi i ...
Ungayikhetha kanjani i-pellet yezinhlanzi ezicwilayo noma ipellets yezinhlanzi ezintantayo? Ukufakwa emgqonyeni we-20KG PP / Inayiloni ngo-GW-450-550-650 Umshini Wokuvula Umlomo Ovulekile
Ukudla kokudla kwezinhlanzi okuthengiswayo kuhlukaniswa kube izipeleti zokuntywila (ezincishisiwe). Kokubili ukudla okuntantayo nokucwilayo kungakhipha ukukhula okwenelisayo, kepha ezinye izinhlobo zezinhlanzi zikhetha ukuntanta, ezinye ziyacwila. Manje lokho, yiluphi uhlobo olungcono lwama-pellets wokudla kwezinhlanzi? Ukucwilisa o ...